Korona fayras (COVID-19) Context link | UnitedHealthcare Community Plan: Medicare & Medicaid Health Plans
Ma u baahan tahay in lagaa caawiyo helida qorshaha?
Korona fayras (COVID-19) Context link
Xarunta Dhigaalada Korona Fayraska (COVID-19) Context link
Waxaan rabnaa inaan kaa caawino inaad ogaato wax ku saabsan Korona Fayraska(COVID-19) si aad u ilaaliso naftaada iyo dadka kugu xeeran. Context link Waxaan kula socodsiin doonaa sida loo helo tallaalka, la isku baaro, loo helo bixiye iyo wax kale oo badan. Context link Haddii aad wax su'aalo ah ka qabto kharashaadka iyo macaashyada aad ka bixiso jeebkaaga, gal akoonkaaga qorshaha caafimaadkaama wac lambarka ku qoran kaarka aqoonsiga xubinnimada. Context link
Aan kaa caawino ilaalinta caafimaadkaaga iyo caafimaadka dadka aad jeceshahay. Context link
Baaritaanada Guri ee Daawooyinka Laga Helo Farmashiga (OTC) ee Bilaashka ah Context link
Dawladda federaalka waxay bilawday mareeg qaran taasoo qoys kasta ka heli karo sadex (3) shixnadood oo ka kooban afar baaritaanada guriga ah ee Covid-19 ee daawooyinka laga helo farmashiga (OTC) ee bilaashka ah oo si toos ah looga shixnadeeyo barta covidtests.gov. Context link
Wixii macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan barnaamijkan booqo covidtests.gov. Context link
Ka hel tallaalka COVID-19 meel kuu dhow Context link
Isticmaal qalabka raadinta tallaalka si uu kaaga caawiyo ka helida dhigaalada tallaalka meel kuu dhow. Context link Tallaalka COVID-19 ay FDA oggolaatay ayaa lagu heli karaa lacag la'aan inta lagu gudajiro xilliga degdegga ah ee caafimaadka dadweynaha. Context link
Ka hel dhigaalada tallaalka COVID-19 meel kuu dhow Context link (Wuxuu ku furmaa Qayb Cusub)
La hadal dhakhtarkaaga adoo jooga guriga Context link
Booqashooyinka Foggaan-arraga ah awgood, waxaad kala hadli kartaa daryeel bixiyaha caafimaad onlaynka 24/7 wixii ku saabsan baahiyaha daryeelka degdegga ah, sida hargab xilliyeedka, xasaasiyadaha, daafka iyo wax kale oo badan. Context link Booqashooyinka daryeelka degdega ah ayaa la heli karaa iyadoo loo marayo danwadaagta caafimaadka fogaan-arraga ee la doorbidayo, oo ay ku jiraan Teladoc, American Well, Doctor On Demand iyo kuwa kale oo badan. Context link
Wixii Medicare Advantage iyo xubnaha Medicaid ah, waxaad sii wadan kartaa helitaanka macaashyada Booqashada Fogaan-arraga ah ee jira ee la bixiyo iyadoo loo marayo mid ka mid ah iskaashatada caafimaadka fogaan-arraga ee la doorbidayo iyadoo aan la wadaagin wax kharash ah. Context link
Wax ka ogow Booqashooyinka Fogaan-arraga ah Context link (Wuxuu ku furmaa Qayb Cusub)
Wax badan oo ku saabsan Korona Fayraska (COVID-19) Context link
Tallaalka Korona Fayraska (COVID-19) Context link
Caymiska iyoDhigaalada (Daawaynta & Baaritaanka) Context link
Nooca Delta Context link
Baaritaanada Guri ee Daawooyinka Laga Helo Farmashiga Context link
Daryeelka Naftaada Context link
Waxa la sameeyo haddii Aad Xanuun Dareento Context link
Booqashooyinka Onlaynka ah Context link
Tallaalada Context link
Afeef Context link
Macaashyada lagu sharraxay mareegtan waxay sharraxayaan shuruudaha dawladda dhexe iyo siyaasadda qaran ee UnitedHealthcare, macaashyada dheeraadka ah ayaa laga heli karaa gobollada qaarkood iyo qorsheyaasha qaarkood. Context link
Boggani wuxuu sharraxayaa manfacyada aannu siino dhammaan xubnaha gobollada oo dhan. Waxay sidoo kale ku jiraan shuruudaha federaalka. Macaashyo badan ayaa laga heli karaa gobollada qaarkood iyo qorshayaasha qaarkood. Context link Waxaan samaynay sharciyo iyo dhaqamo lagu dabaqi karo qaar ka mid ah alaabadayada waqtigan. Context link Macluumaadkan waa mid kooban waana la beddeli karaa. Context link Wixii macluumaad dheeraad ah, la xiriir wakiilka akoonkaaga ama wac lambarka ku qoran kaarkaaga aqoonsiga (ID) xubinnimada. Context link
Cusbooneysintii Ugu Dambeysay: 05.17.2022 waqtiga 12:41 GALABNIMO CDT